Body qaab calculator
Body calculator boqolkiiba baruurta
Body qaab calculator kuu ogolaanayaa inaad si ay u xisaabiso koobin kala duwan ee jirkaaga, sida miisaanka fiican, baruurta jidhka iyo boqolkiiba baruurta jidhka, oo aan miisaan lahayn baruur, jidhku nooca qaab, shiid asalka, shiid miisaanka oo yaraada iyo kale. Waxaa xisaabinaya ku saleysan jinsigaaga, da'da, miisaanka, tirada jirka iyo heerka waxqabadka.
Nooca Jinsiga: Dhaddig Lab
cm cagaha / inches
Garaaca wadnaha lagu nasto:
Xisaabiyey sida celceliska 3-5 cabbirka tirada garaaca wadnaha halkii daqiiqo subaxdii ka dib markii hurdada sariirta.
Dhexda (naggadi oo thinnest):
Sida caadiga ah, tani waa meel ku xusan xuddunta.
HIPS (qaybta ubalaadhan):
Ballaadhkiisuna wuxuu xusul:
Taag aad isku midka ah gacanta dhulka ku. Laab gacanta iib- aad ilaa 90 degree si aad dhudhun yahay dadab iyo in ay dhulka. Isticmaal farta suulka iyo farta gacanta kale oo lagu cabbiro masaafada u dhexeysa lafaha. Cabir fog gacanta (dhexda fartaada suulka iyo farta) la baaxadda ah taas oo aad ballaadhkiisuna xusulka.
Sheeg heerka dhaqdhaqaaqa nololeed.
hawlaha yah hawlaha light hawlaha celcelis waxqabadka wanaagsan hawlaha ugu badan
Sheeg Ujeedada hawlaha isboortiga.
heli qaab jidhka wanaagsan Miisaanka oo yaraada kordhin madaale jirka ciyaaraha fudud sports muran
Xisaabi miisaankaaga fiican, baruurta jidhka iyo boqolkiiba baruurta jidhka, oo aan miisaan lahayn baruur, jirka nooca qaab, shiid asalka, shiid miisaanka oo yaraada iyo kale.
Counter calorie Online
Imisa calories aad ku gubi (kharashka of calories) halka socda, socda, dabaasha, iyo wixii la mid ah.
Faa'iido Murqo calculator
Xisaabi tirada of kaloori maalintii aad u baahan tahay haddii aad rabto in la dhiso murqaha.
Faa'iido Miisaanka calculator
Xisaabi tirada of kaloori maalintii aad u baahan tahay haddii aad rabto in ay helaan miisaankaaga iyo muruqyada, ama in ay lumiyaan miisaan.